Mareykanka oo sheegay in ay dileen Jihadi John weerar dhanka cirka ah – STAR FM SOMALIA
Dowladda Mareykanka ayaa ku kalsoon in Jihadi John lagu dilay duqeyntii diyaradaha aan duuliyaha laheyn ah ka geysteen magaalada Raqqa ee dalka Suuriya.
Col. Steve Warren ayaa sheegay in weerarkii khamiista ee Raqqa uu u dhacay bartilmaameedka loogu talagalay, laakiin ay wakhti qaadan doonto in si rasmi ah u sheegaan inay aheyd Guul.
Warbaahinta reer galbeedka oo soo xiganayay ilo kala duwan ayaa sheegaya in loo maleynayo in Jihadi John oo Daacish u qaabilsanaa qoor-goynta lagu dilay weerarkaas.
Waxaa sidoo kale la sheegayaa in ruux kale oo la saarnaa gaariga uu la socday Jihadi John lagu dilay weerarkaas.
Ra’iisul Wasaaraha Britain David Cameron ayaa sheegay inay wali xaqiijiyaan dhab ahaanshaha inuu dhintay Jihadi John, waxaana uu sheegay in dowladda Mareykanka ay arrintan xaqiijinteeda kala shaqeynayaan.
Sawir kore oo magaalada Raqqa ah ayaa muujinayay in goobta duqeynta ka dhacday ay aheyd minaarada saacada ee magaalada Raqqa, halkaasoo ah goobaha inta badan ay dilalka ku fuliyaan Daacish.
Mohammed Emwazi oo ah muwaadin British ah, balse asal ahaan ka soo jeeda Kuwait ayaa ahaa nin aad loo raadinayay wixii ka dambeeyay markii uu ka soo muuqday muuqaalo lagu gowracayay Wariyeyaal iyo shaqaale sama fal u dhashay dalalka reer Galbeedka.